PressReader - Kwayedza: 2018-10-12 - Mitupo, zvidawo namadzinza
Mitupo, zvidawo namadzinza
Kwayedza - 2018-10-12 - Denhe Reruzivo - Ticha Danga
KWATAKABVA mitunhu, anodaro mumwe muimbi. Kuti tizosvika patiri nhasi uno, tikacheuka shure kwatabva tinoona makomo nemakomo nemikwidza iyo takasusukidza kusvika patiri pano.
Taisimira matehwe muchiuno bedzi ayo aidaidzwa kuti nhembe. Varume vaipfeka mhapa kumashure kumberi vopfeka nhahwamaringa. Vakadzi vaipfekawo shashiko kumberi.
Vaigara mumasango semhuka vachipona nehwenha netsombori vachidyawo nyama yemhuka dzavaivhima. Vaidzidza mararamiro nemafambiro emhuka uko kwakazobva kudunhurirwa kwemitupo yedu nemadzinza.
Zvidawo zvakazokandwa mudariro kuti zviratidze utsanzi hwemhuka uhwo hwaizoonekwa nevaihutevedzera dzokono vozopiwa mitupo yemhuka dzavaitoredzera. Vaya vaityisa asi ivo vasingatyi vaibva vanzi ndidzo shumba nekudaro zvizvarwa zvedzinde ravo zvaibva zvanzi ndivana Shumba. Vaya vana chinyerere vasingadi zvekutaura taura kana kutukana nevamwe ndivo vana Gwai, gumbi vana machuma nhasi uno.
Chikamu chino tinotarisa mitupo, zvidawo zvacho pamwe nemadzinza kuti tigoona kwatakabva nako. Vaera mhara
ndevechidawo cheMbuya kana kuti Chikonamombe. Dzinza ravo ndereMashayamombe. Vanasikana vavo vavanozvara vanonzi vanaMaromo.
Kune vaera moyo avo vane mapandiko akawanda emutupo mumwe chetewo. Kune vaeramoyo vechidawo cheMoyondizvo vari vedzinza reVarozvi. Vanozviti siyanisei zvishoma nevaera moyo vedzinza reJiri asi chidawo chavo chimwe chete cheMoyondizvo.
Panozoitawo vaera moyo vedzinza reMangwende. Ava ndevechidawo cheMuzukuru. Vamwe zvakare vaera moyo ndevedzinza raNyamweda, chidavo chavo chiri Zuruvi.
Moyo yechidawo cheMakumire ndeye dzinza revaDuma. Moyo iyi yakati wandei kusanganisira Moyo Chirandu iyo ine mukurumbira. Tinenge tisina kupedza kutaura nezveMoyo kana tikasiya Moyo Muturikwa.
Kunozoita vaera moyo vedzinza reRusike vari vechidawo cheWadyegora. Kunewo Moyo Nematombo neMoyo Mugonderwa tisingakanganwi Moyo Wakapiwa neMoyo Madzorera. Vana Sinyoro ndivanaMoyo zvekare vari vedzinza revaNjanja.
Vaera Shava havadi kusaririrawo mukupatsanurana kwavanozviita. Kune vaera Shava vechidawo cheMusiyamwa. VanaMusiyamwa ava ndevedzinza revaHera. Vakapatsanurana nanaShava Mutenhesanwa vechidawo cheChiweshe. Kune zvakare Shava yechidawo cheMufakose vari vedzinza reHwata.
Shava yeimwe mhando inonoturunura vedzinza revaChamaya vari vechidawo cheNyakudirwa. Shavawo yechidawo cheMwendamberi inozvisiyanisa nedzimwe Shava nekuda kwedzinza ravo reChivero.
Tinopedzisira neShava yedzinza rekwaSeke asi chidawo chavo chiri cheVhuramavi.
Shumba dzinopinimidzawo dzirimo mukupatsanurana zvichienderanawo nemadzinza nezvidawo zvavo. VanaShumba ndivo vanaRupapatyuro. Kune Shumba inobva nepaChivi apa iri yedzinza rekwaChivi. Ndiyo yechidawo cheMurambwi. Kunouyawo Shumba yechidawo cheNyamuzihwa iri yedzinza reNenguo.
Vaera shumba vechidawo cheMhazi ndevedzinza revaGonera. Vanoenda mberi vachizvipatsanura kuchibuda Shumba Muguriri dzinza ravo riri Nemamwa. Kune imwewo shumba yedzinza reCharumbira vari vechidawo cheSipambi
VanaDziva havana mipatsa yakawanda hayo asi iripo inogona kusvika kumitatu kana mina. Kune vaera Dziva vari vechidawo cheMunhobvu Wamambo. Ava ndevedzinza reNyika.
Kunoitawo Dziva vari vechidawo cheMuzivikanwi. Dzinza ravo ndereSave. Kudzinza reSave iroro kunobuda zvakare imwe mhando yeDziva iri yechidawo cheMapira.
VaeraGumbo ndivo vechidawo cheMadyirapanze kana kuti Sambiri. VanaGushungo ndivo vaera Ngonya vari vedzinza rekwaZvimba.
Kune Soko yechidawo cheMurehwa vari vedzinza revaShawasha kozoitawo Soko vechidao cheKumene asi dzinza ravo riri reMudzimurema.